Dawladda Soomaaliya way beenisay "xoogag mucaarad ah".
Dawladda Soomaaliya way beenisay “xoogag mucaarad ah”.
Dowladda Federaalka Soomaaliya “Wuxuu ku tilmaamay been” Sawiro maalmihii lasoo dhaafay ka soo baxayay baraha bulshada iyo warbaahinta qaar ayaa sheegaya in maleeshiyooyin hubeysan oo ka soo horjeeday doorashada dowladda ay isku aruursanayeen duleedka magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Wasiir ku xigeenka wasaarada warfaafinta C / raxmaan Yuusuf Cumar Al-Cadaala oo ka gaabsaday in magaciisa la xuso ayaa sheegay in aan loo ogoleyn in uu saxaafada la hadlo, wuxuuna sheegay in muuqaaladan ay yihiin kuwo horey loo duubay isla markaana aysan ciidamadu qeyb ka aheyn kacdoon.
“Fiidiyowga wareegaya maalmahan xoogagga ka soo horjeedda doorashada waa mid aan sal iyo raad lahayn mana ahan fiidiyoow dhowaan laga duubay ciidamada mana aha jabhadda.” ayuu yidhi Al Adalla.
Al-Cadaala ayaa sidoo kale ugu baaqay warbaahinta iyo qorayaasha inaysan colaad hurin.
“Waxaan ka codsanayaa warbaahinta iyo idaacadaha inay ka waantoobaan beentaas. Waxay ka soo horjeedaa qaranimada, militariga, iyo shacabka Soomaaliyeed. Colaad hurinta ma ahan dimuqraadiyad.”
Hadalka ka soo yeeray wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xili dhawaan muuqaal laga soo saaray rag hubeysan oo ku sugan duleedka magaalada Muqdisho kuwaa oo la sheegay in ay isku diyaarinayaan doorashada soo socota.
17 Herbs to Are attempting for Intellect and Physique Advantages, Says
This breakfast mistake reasons you to realize weight,